Ukutshatyalaliswa kwabantwana abaselula ... Imfundo | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Xa usuphelile, vumela uqhubeke unika inkxaso
Ukhuseleko lomnatha wokuwa kwamahhala
Akadibana nabazali abangalungelekanga, emva koko, umntu unokukhumbula kakuhle ixesha lakhe lokukhula, kodwa ke uvakalelwa kukuba ukhululekile kuninzi - kungeyonto umva unomdla onzima njengomzali kwaye ngelo xesha ungancedi. Enyanisweni sithetha ngokutshatyalaliswa, ixesha elide lokukrazula ezininzi, enoba ngumngeni wangempela kubantwana, kodwa ngakumbi kubazali.
Ukuphelelwa ngumntwana kuyisigaba esibalulekileyo sokuphuhlisa
Abantwana baba ngama-adolescents kwaye ekugqibeleni baba ngabantu abadala abazimele. Abazali bahlala benzima kunye nayo kwaye ukuvakalelwa kukuba intsapho iyaphuka ayenzi izinto lula.
Ukutshatyalaliswa komntwana wakho
Vumela ukuba sele uye kwi-kindergarten
Xa usana luzalwa, akukho mntu ucinga ukuba uluntu luya kuthatha inkambo yalo yemvelo ezinyangeni ezimbalwa kwaye ugxininise uphuhliso lonke ngokuyeka ukuhamba.
Ukususela kumanyathelo okuqala ukuya ekungeneni kwirejista - ukuhlukana kwabazali nomntwana kuza kwizitolimende, kodwa akaze ayeke.
Ukuqala ukwahlukana kwexesha elide kufikelele kwangoko kunye nohambo lwemihla ngemihla ukuya kwi-Landschulheim kwiklasi yesihlanu. Abantwana abaninzi bayethusa, kodwa nabazali banenkxalabo: Ngaba ingqalelo eyaneleyo kumvuzo wam umntwana? Kuthekani ukuba ibuhlungu okanye igule? Uya kuhamba njani ukuba mhlawumbi abanye bamxhaphaza ngohambo?
Zonke ezo ntswelo zokuvumela ukuhamba kufuneka, kodwa, zifihle abazali kakuhle kubantwana kwaye kunokuba zikwazi ukuzithemba ngokwenza oko! Kubi kakhulu ukubanqanda abantwana ngenxa yokwesaba, ngoko banika amava amaninzi kunye namava, amathuba okuphuhliswa kunye nokuzonwabisa okuninzi!
Ngenye imini uya kuba khona! Ubushushu buza kuqala ngobunzima obuncinane, umntwana ophikisanayo ngokukhawuleza ukuba isithunywa esincinane sinokuthi sibe yinkomo. Amakhwenkwe, kodwa kunye namantombazana, ngokukhawuleza ahoxise ngakumbi, ahlukane ngokuzenzekelayo kuzo zonke iintsapho.
Eli nyathelo libuhlungu, kodwa lubalulekile ekuphuculeni impilo. Isangqa soMhlobo siwuthintela ngakumbi nangakumbi xa uvumela ukuhamba kwintsapho. Oko abahlobo abaye bacinge ngako kuwe kubaluleke ngakumbi kunombono wabazali, ubuncinane ubuncinane.
Kuba nangona abantwana bengenakuhlala befuna ukuyivuma, beyazi ukuba ukhuseleko olusekhaya lukhuseleke kakhulu. Iintsholongwane zidinga ingqiqo kunanini ngaphambili, kwaye ngokuqhelekileyo zisebenza ngokuzingca ngokokuba ukuqonda okufunekayo kuba yinto enamandla kubazali.
Iintsholongwane zinzima ukukhulula inkululeko, kungekhona nje imvelo yenyama, efana nokuvusa ixesha elide, ukuphuma nokubuyela, kodwa kunye nenkululeko yeemvo zabo, iimvo zabo kunye neemfuno zabo.
Ukuvumela ukuhamba ngethuba lokutshatyalaliswa komntwana - kodwa uhlale ukhona kubantwana
Oku kungaqala ngongoma womculo uze uphele ngexesha le-Intanethi.
Kakade akudingeki ubekezele abantwana. Imigaqo ekhompyutheni inokunceda ukudala inkululeko nokukhusela abantu abatsha nantoni na. Abazali banokunceda kakhulu ngeli xesha: imemori yabo ye-Abnabelung.
Yintoni eyayingcono? Yintoni abazali bakho abakwenzayo kakuhle na? Yintoni endiyathanda ukuyenza kunye nento enye? Ndifuna njani ukuqinisa umntwana wam ukuze abe ngumntu ngokwakhe?
Iintsholongwane zidinga ukuphela kwazo, abazali kufuneka babe nethephelo yokubamba abantwana babo kumava amabi.
Okwangoku kodwa kubaluleke kakhulu: Musa ukuthatha nantoni na ngokwayo kwesi sigaba, kuyinto evamile ukuba abantwana bavukele abazali babo, ngoku kwaye!